Madaxweyne Farmaajo oo Madaxweyne Cagjar uu Addis Ababa ku soodhaweeyey (dhegayso) – Radio Daljir
Madaxweyne Farmaajo oo Madaxweyne Cagjar uu Addis Ababa ku soodhaweeyey (dhegayso)
Seteembar 12, 2018 2:10 g 1
Madaxweyne Farmaajo oo maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa isla maanta kulan la qaatay Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar (Mustafe Cagjar).
Kulanka oo aan weli faahfaahintiisa la helin ayaa la isla soo qaaday wada shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Waxaa Sidoo kale kulanka looga hadlay xoojinta isbaddalka gobolka Soomaalida iyo kan guud ee ka socda geeska Afrika.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la qorshaynayaa in uu ka qaybgalo shir ay isugu imaanayaan madaxda urur goboleedka IGAD oo looga hadli doono xubinnimada Eriteriya oo mar kale la filayo in ay ka midnoqoto xubnaha Urur Goboleedka IGAD.
Guddi Aqalka Sare oo isku dayaya muujinta in aysan weli ku milmin Xukuumadda
MA ADAA FAHMAYBA!.